MDC-T Inodzikisira Masimba eVatsigiri Vayo Kunze kweNyika
Pane kusawirirana kukuru mu MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai zvichitevera kuvandudza kwayakaita bumbiro rayo remitemo.
Bumbiro reMDC-T harichina hutungamiri hwedunhu guru, kana provincial executive yevari kunze kwenyika, uye nhengo dzebato iri dziri kunze kwenyika, hadzichina masimba ekugara pamusangano mukuru webato wekongiresi senhumwa dzine masimba.
Vatsigiri ava vanogona kuenda kukongiresi sevanhuwo zvavo vasina masimba ekutaura zvinhu zvinotambira nebato pamusanganu uyu.
MDC-T inoti vatsigiri vayo vari kunze kwenyika vanofanirwa kuzvironga muzvikwata zvichienderana nenzvimbo nehuwandu haevanhu vanenge vari munzvimbo idzi. Bato iri rinoti zvikwata izvi zvinogona kuumba chikwata chinenge chichifambisa mabasa ebato munyika mavanenge vari, kana kuti external coordinating committees.
Munyori anoona nezvekuronga misangano mu MDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti zvakaita kuti bato ravo ritore danho iri kusawarirana kukuru kuri munhengo dzavo dziri kunze kwenyika, pamwe nefambisirwo emari dzinenge dzabviswa nenhengo dzebato inenge ichifanirwa kuendeswa kuhomwe yebato.
Sachigaro we MDC -T muAmerica, VaDen Moyo, vanoti nyaya dzekusawirirana dziri kukonzerwa nevanhu vakakundwa pasarudzo. VaMoyo vanonzi nechimwe chikwata cheMDC-T chiri muAmerica, havana kusarudzwa nenzira kwayo pasarudzo dzakakokerwa nevaimbove sachigaro wevechidiki muMDC-T, VaTamsanqa Mahlangu, idzo dzkaitirwa kuCincinnati
Imwe nhengo yevanhu vakavamba MDC-T mu America, Professor Stanford Mukasa, avo vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania, vanoti zvaitwa neMDC-T kungoedza kugadzirisa dambudziko rakonzwerwa nemakomiti ekunze asiri kuwirirana. VaMukasa vanoti danho ratora nebato ravo rakanaka nekuti hutungamiri hweMDC-T muZimbabwe hunenge hwotaura nevakuru vema branches.
VaMukasa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muMDC-T mu America zvachose zvekuti hutungamiriri hunozviti huripo, hauna vatsigiri vakawanda.
Huwandu uhu huri kuenzaniswa nevanhu vemuchikwata cheMDC-T chaitsigira VaZvidzai Ruzvidzo kuti vange vachitungamira bato muAmerica pasarudzo dzinonzi dzakatadza kufambiswa zvakanaka naVaMahlangu kuCincinnati, izvo zvinonzi naVaMoyo hazvina maturo ose.
VaRuzvidzo ndivo sachigaro veColumbus Branch.
Munyori weMDC-T muBritain, Va Owen Muganda, vanoti bato ravo riri kukanganisa nekuvatorera masimba.
Hurukuro naVaDan Moyo
Hurukuro naVaStanford Mukasa
Hurukuro naVaOwen Magunda